VaChebundo Voendesa Chikumbiro Chekubvisa Mari yeChibatiso kuHigh Court
Chivabvu 22, 2009
Mumiriri weKweKwe mudare reHouse of Assembly, VaBlessing Chebundo, havana kukwanisa kuti nyaya yavo yekukumbira kupihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, inzwikwe nedare sezvo muchuchisi wehurumende apikisa chikumbiro ichi achiti nyaya iri kupomerwa VaChebundo ihombe.
Magweta ari kumirira VaChebundo abva ati ava kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro, kuitira kuti rizeye nyaya yekuti VaChebundo vopihwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
VaChebundo vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mwanasikana ane makore gumi nematatu. Asi gweta raVaChibundo rinoti mumiriri weKwekwe mudare reparamende, ari kuramba mhosva yaari kupomerwa.
Gweta ranga richimirira VaChebundo, VaTapera Sengweni pamwe nameya weKwekwe, VaShadreck Tobaiwa, vanonzi vasingwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza mafambisirwo enyaya iri kupomerwa VaChebundo.
Zvinonzi vaviri ava vakaenda kumba kwevabereki vemusikana akabatwa chibharo vachida kutaura nevabereki vemwana uyu pamusoro penyaya iri mumaoko emapurisa.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yevaviri ava ichafambiswa seyi.
Patience Rusere weStudio7 aita aita hurukuro negweta idzva raVa Chebundo, VaReginald Chidavanyika, kuti tinzwe zvaitika.
Hurukuro naVaReginald Chidavenyika